Jasi muArmenia zvombo: kukosha kwenhoroondo, modernity
Inotungamirwa, Secondary dzidzo uye zvikoro
Armenia akamborara munhoroondo yayo zvikuru zvizhinji. Kamwe raiva rudzi rukuru, ipapo chikamu USSR. Nhasi, ari nyika changamire, vachifamba zvavo kukura kuzvida zvinodhura, kunyange asina mukuru ose nechivimbo tichiriratidza pamepu. Uye zvakatonyanya kudaro vanhu vashoma vachakwanisa kutaura zvakajeka nguvo maoko Armenia, ruvara mutengo ayo mureza, vanouti mutungamiriri enyika. Zvinofanira kuzadza pakakoromoka achiri aoma.
Kuti State nokuti anopfuura zviuru 2,5 makore uye vanhu vanozivikanwa zvakatowanda. Armenia rabva kuburikidza munoitika zhinji nezvisingafadzi, uye zvavakawana vasabatanidzwe, chaiva hwacho uye akavazve kuzvimirira zvizere. Uye nhoroondo yacho akapfuma kwave nyore vanosungirwa kuratidza zviri zviratidzo zvayo ano. Zvinozivikanwa kuti mumwe mamiriro vari kazhinji matatu rumbo, mufananidzo uye mureza. Zviri kutaura nezvazvo zvizere.
Armenia National zviratidzo
Zvinosuruvarisa tricolor ano ane chokuita munhoroondo nyika ino uye azviratidza chete muna 1918. Red, zvitema uye Orange mavara vakasarudzwa uye anotenderwa chakagadzirwa, havasi kuratidza Chirevo inoshandiswa emakore. Senzira Soviet Union akashandisa chinyakare mutsvuku jira nevamwe mashoko, akasiyana mumwe nomumwe zvokuvhoterwa, asi pashure kuzivisa rusununguko Armenia akatanga zvakare kushandisa tricolor pre-Soviet. Kukosha kwayo maruva chinotsanangurwa sezvinotevera: Red - vane ropa varwi yemo, zvitema - denga, uye Orange rinomiririra yakaorera minda.
Hymn anovengawo nhoroondo chinokosha, kekutanga akazviratidza 1918 uye dzakapfuura chete vaviri makore, pashure pavanopinda USSR akarega kushandiswa kwayo kwenguva refu. Kwairi Ivo vakadzoka pashure pokuwa nyika muna 1991, uye iye achiri kushanda. Munyori pemitsara ndiro Mikael Nalbandian, uye music - Barsegh Kanachyan.
Asi pamusoro nguvo maoko Armenia ndiko kutaura oga, uye shoma zvizere. Kuti zvinokwanisika kutonga pamusoro kare munyika, nekuti vakasiyana mureza uye rwenyika, ane chaizvo akapfuma munhoroondo.
Pasinei chokwadi kuti, kufanana rwenyika uye mureza akabvumirwa chete muna 1918, apo nyika yawana rusununguko, asi vasati vapinda USSR, ndiko kune mukuru pamwero kupfuura zvadziri, yakavakirwa nhoroondo yacho. Paunotanga kutarisa nguvo maoko Armenia, zvakaoma kunzwisisa izvo nyika ripi, izvozvo Haingambovi zvakanaka kufunga nezvazvo zvishoma ano ezvinhu. Huru mavara goridhe, mutsvuku, zvitema uye orenji. Lion uye gondo vakabata nhoo rakakamurwa sectors zvina uye chinokosha. Pose rayo rekona chiratidzo mumwe mukuru Dynasties akatonga Armenia. Kune ina: Bagratids kubva IX kuti XI remakore ane achimhanya shumba iri dzvuku munda chokumusoro rworuboshwe wekona, Arshakids I kuti V remakore makondo maviri rebhuruu pazasi kuruboshwe, Artashesids akatonga BC, pamwe shiri iri dzvuku pazasi, uye pakupedzisira , Rubenids, rakatonga kuti yakajeka kufungisisa XIV remakore riri mu dzasara. Pakati Nde pegomo Armenia - Ararat pamwe raNoa areka pamusoro.
jasi muArmenia zvombo akanga kuzodzosera kubvumirwa muna 1991, vemifananidzo ayo vakanga vadamwa Alexander Tamanyan uye Akop Kodzhoyan. Pasinei simba ravo, kwete saka kare zvakanzi vakawana vanonzi heraldic mashoko okuti kana zvikanganiso. Chero mifananidzo kana mifananidzo chiratidzo Armenia anotarisa zvikukutu chaizvo, asi nyanzvi achirova zvimwe zvinhu zvidiki.
Saka, shumba, chiratidzo simba uye uchenjeri kazhinji, uye anoratidzwa nomuromo wakashama, pano, nekusiyana, akavharwa. Muchiitiko chino, rinogona kududzirwa sechiratidzo chokusava nesimba uye munjodzi. Uyewo, dzimwe nyanzvi dzinofunga kusiya pasina ari Mashoko pamusoro Ribbon pazasi chiratidzo. Zvichida mashomanana akatevera jasi Armenian zvombo vachatongerwa ukachinja zviduku, apo kuramba zvizere kuchinja.
Vaya vanoziva kuti gomo chiratidzo kunoratidza muArmenia yeArarat, unganetseka kuti, sei zvichidaro kuti ari munharaunda Turkey. Chokwadi kuti kwenguva refu, zvechokwadi yaiva mukati miganhu ehurumende, ane chiratidzo iri. Zvisinei, muna 1921, apo yatova Armenian SSR anenge apinda Soviet Union, pasi chibvumirano Moscow uye Kars zvibvumirano, dzimwe ndima vakaenda Turkey. Somugumisiro, gomo kunze kwenyika, 32 makiromita kure. Kunyange zvakadaro, izvozvo yasara zvisina hunhu waro uye chipo kusanganisira pamusoro maoko.
Mashoko okuti "kamura uye kutonga" iye akati, munoziva? Chii chinorehwa 'kamura uye kutonga "uye vanotungamirirwa musimboti ichi?
The nenzvimbo nzvimbo taiga. Geographical nzvimbo taiga
Chii bhokisi? Zvimwe zviitiko zviri rectangle
Chii yaitonga? Inorevei munguva yedu?
Nyika yakakurumbira kudarika dzimwe munyika. Monaco: dzinonakidza chokwadi pamusoro hugota
Difficulties - chinhu nechinangwa chaicho
How kusarudza chibooreso?
The zvikuru kurwisana Great Patriotic War (tangi, etc.)
Angina. Chii chinonzi chirwere ichi uye kuti kunoratidzwa
Thermal matsime muHungary. Hotels muHungary pamwe chafariz matsime
"Mazai eNuremberg": nyanzvi dzevarindi vekuGermany
How kusungirira mutsetse hove kuti leash nomazvo?
Zvingaitwa CaCl2, H2SO4
Ndechipi rinobva mhete uremu: wongororo uye sei vanoshandira
Welding basa - inokwanisika nzira kusika zvachose kubatana
Pedyo Nyika. Venus uye Mars - vaviri dzepedyo "muvakidzani" Nyika
Chiyero chekutsvaga kwepascenta nevhiki (tafura). Maitiro uye kusagadzikana kwekukura kweparcenta
Honda CRM 250 motokari rekuongorora: zvinhu, tsanangudzo uye kuongorora